Archive du 20171211
Marc Ravalomanana Hanao fanambarana miezinezina
Ambohipihaonan’ny mpikatroka ao anatin’ny antoko Tiako I Madagasikara na TIM sy ny olom-pirenena tsy ankanavaka ny eny amin’ny FOFIKRI Ankadikely Ilafy anio 11 desambra, ka nasaina manokana ireo ben’ny tanàna rehetra manerana ny Nosy lany tamin’ny anaran’ny Antoko TIM.
Vehivavy Malagasy manao politika Zara raha misy 0,03%
Vehivavy ny 59,49 %-n’ny Malagasy, raha ny fanazavana nandritry ny atrikasa manokana miompana amin’ny vehivavy sy ny politika notontosain’ny avy eo anivon’ny minisiteran’ny fampianarana teknika sy ny fampananan’asa niaraka tamina mpiara-miombon’antoka vitsivitsy tetsy amin’ny hotely Carlton Anosy tamin’ny faran’ity herinandro ity.
Paikady hifehezana ny asa fanaovan-gazety Mitombo isa ireo manakiana ny fitondram-panjakana
Herintaona mahery izay no naha lalàna manan-kery ny fehezan-dalàna momba ny serasera. Tsapa ankehitriny fa manampy trotraka ary tsy mamaha olana velively araka ny nampanantenaina ny « fampiharana » azy kanefa dia natao amboletra ny fandaniana ny lalàna,
Fanalam-baraka ny filoha tamin’ny facebook Nidoboka eny Antanimora ilay tovolahy
Niaiky ny helony rehefa nohadihadian’ny polisin’ny BC ilay tovolahy mpamoaka sary sy mpaneho anaty tambajotra facebook, ary dia nidoboka am-ponja vonjimaika eny Antanimora nanomboka ny sabotsy teo.
Vary simba tratra tany Toamasina Hiakatra fitsarana ireo Pakistanais 3
Nanome baiko ny fisamborana sy ny fanaovana fakana am-bavany ireto mpandraharaha mpanafatra vary “Pakistanais” telo lahy, izay tompon’ny orinasa “Moto Commodities” sy ny “White Rice” ary ilay mpiara-miasa amin’izy ireo eto Toamasina,
Madagascar Airways Tsy mety mandoa hofan-trano ?
Misy feo mivoaka ankehitriny nandrenesana fa tsy mbola nandoa ny hofan’ny Hangar itoerany eny Ivato tao anatin’ny roa taona nisiany ny kaompaniam-pitaterana ana habakabaka tsy miankina Madagascar Airways.Any amin’ny ADEMA moa no tokony handoavana io vola hofan-trano io, ary manao izany ny rehetra manana fiaramanidina sy birao eny, ireo orinasa tsy miankna no resahana eto.
Ady amin’ny kolikoly Mitarazoka ny fampiharana ny lalàna
Nankalazaina ny sabotsy 09 desambra lasa teo ny andro maneran-tany iadiana amin’ny kolikoly.
Infocentre de la salle Mankalaza ny faha-25 taona niorenany
Feno 25 taona tamin’ity taona 2017 ity ny sekoly ambony Infocentre de la salle eny Soavimbahoaka. Fotoam-pivavahana nentina nisaorana sy nanomezam-boninahitra an’Andriamanitra, narahin’ny fanokafana ny taom-pianarana vaovao 2017-2018 sy namoahana ireo mpianatra 62 mianadahy,
Fambolen-kazo 2017 – 2018 2.000 Ha isam-paritra no tanjona
Nosokafana tao amin’ny kaominina Ambohibary misy ny tanin’ny orinasa Fanalamanga ao Moramanga ny sabotsy misandratr’andro teo ny taom-pambolen-kazo taona 2017 – 2018 ho an’ny governemanta.
Ady tany eny Ankadindravola Tsy vola fa fanafoanana ny “Titre” no takianay, hoy ireo mpitory
Tanina fianakaviana iray eny Ankadindravola Ivato no azon’olona mahitahita sy nahavitany taratasy ara-dalàna raha ny fanazavan’ireo fianakaviana lasibatra. Efa azony ny tany hafa teo amin’ny manodidina, izay tsy misy hidiran’ireto fianakaviana ireto, ka tafiditra afovoany ny azy ireo.
Tompondaka nasionaly Basikety N1 A 2017 Nody any Boeny avokoa ny amboara lahy sy vavy
Noporofoin’ny mpilalaon’i Boeny ny maha sangany azy ireo eo amin’ny taranja basikety baolina.
Boxe Française Savate Nahomby ny fiarahana tamin’ny Kempo
Nangotrakaara-bakiteny tokoa ny hetsika« Grand Combat Boxe Française Savate 2017 » notontosain’ny ligin’Analamanga amin’ity taranja ity tetsy amin’ny kianja mitafon’i Mahamasina omaly alahady 10 desambra. Ankoatra ireo fifaninana Boxe Savate nahitana fifanandrinana 10 dia nisongadina ihany koa ny ady Kempo samihafa niisa 6.
Fidangan’ny vidim-piainana Ny sandam-bola Malagasy no mila fanamboarana
Tsy ny vidim-bary loatra no tena olana eto amintsika hoy Rafanomezantsoa Jean Nirina filoha nasionalin’ny fikambanana HAFARI Malagasy na ny fiakaran’ny vidin-tsolika matetika fa ny sandam-bolantsika Malagasy mihitsy no tokony amboarina. Samy manam-bola avokoa ny tsirairay hoy izy saingy ny lanjany no tsy misy.
Distrikan’Ikongo Hanjakan’ny fitsaram-bahoaka
Trangana fitsaram-bahoaka miisa 5 tao anatin’ny 3 volana no niseho tao amin’ny distrikan’Ikongo, hoy ny depiote voafidy tany an-toerana, Brunel Razafitsiandraofa.
Tojo fisavan’ny zandary Navelan’ireo jiolahy ny sakaosy feno basy
Lehilahy telo no nandositra avy hatrany rehefa nifanena tamin’ny zandary avy ao amin’ny borigady Kianjandrakefona nanao fisafoana tao amin’ny tsenan’ny Fokontany Manaritsoa, Kaominina Mahasoa, distrikan’ Ambositra.
FATIN-JAZAKELY – TOAMASINA
Fatin-jazakely iray nisy nanipy teo amin’ny tokotanin’ny lapan’ny Faritra ao Atsinanana – Toamasina renivohitra. Asa izay tena heviny satria izany faritra izany, any amin’ny faritany, dia toa ny prezidansa eto an-drenivohitra ary sady harovana fatratra no hajaina. Voalohany no nisy tranga toa izao tao amin’ity toerana ity ary nisy fanadihadiana nosokafana vokatr’izany.
Savorovoro momba an’i Jerosalema Nihaona ny filoha Frantsay sy ny praiminisitra Israelianina
Mitombo ny savorovoro any Proche Orient taorian’ny fanambaran’ny filoha Amerikanina Donald Trump fa ekena ho renivohitr’i Israely i Jerosalema.